Iphupha lokungena Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi 'ngenisa' lisetyenziswe kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu kwaye ngenxa yoko lineentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo. Umntu unokuhamba ngemoto, ngololiwe okanye ngenqwelomoya. Nabani na ongena kwishishini uba liqabane kwishishini, aqale ishishini, okanye athathe inxaxheba kwimicimbi yezemali.
Ungangena kwakhona isihloko ngokuthatha inxaxheba kwingxoxo okanye ukungena kwisakhiwo, umzekelo ngokungena ngefestile. Kwezemidlalo, "ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo" kuthetha ukuhlasela umdlali welinye iqela ngenkani; Phakathi kwabakhweli beentaba, ukunyuka eludongeni lwamatye kubizwa "ukunyuka udonga."
Ukungena kwiphupha kunokwenzeka kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu. Ukutolikwa kwamaphupha, umntu ophuphayo kufuneka ahlahlele kuqala ukuba yintoni umxholo wephupha lakhe. Ukuba ukhwela kwibhaluni kwaye ubhabhe, ungayonwabela inkululeko. Ukuba ubona umntu engena kwindlu, uphawu lwephupha mhlawumbi lubangela isoyikiso.
1 Uphawu lwephupha «faka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «faka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «faka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «faka» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "faka" inokuba luphawu lwesiqalo esitsha sethemba ekuchazeni iphupha kwaye ibonakalise umnqweno wokuphuhlisa ulwazi olutsha nolwazi olubanzi. Ephupheni ungena kwisithuthi ukuba usendleleni eya a umhlaba ongaziwayo yenza kwaye ubazi. Nabani na ongena emotweni ephupheni, mhlawumbi njenge-hitchhiker, kungekudala uza kuthatha uhambo okanye afune ukutshintsha.
Ukutolikwa kwephupha, uphawu lwephupha 'faka' linokuqondwa ukuba lithetha ukuba kunjalo ukungena okungagunyaziswanga ifunyenwe kwiindawo ezingaqhelekanga ukufezekisa iinjongo ezithile. Kuyo kubonakala ke nokuba kukoyika ukuphupha ngaphambi kwenyathelo okanye ukulangazelela oko.
Nabani na ophupha ngokungena endlwini yomnye umntu njengomntu oqhekezayo kufuneka alindele ukuba ayizukuba mnandi. amava yenza ngokwenene. Ukungena ngefestile sisilumkiso seembambano kunye nelahleko ekuchazeni amaphupha.
Uphawu lwephupha «faka» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "ukungena" njengendlela yokuhamba kukubonisa ukulangazelela okungakumbi. utshintsho. Umphuphi, mhlawumbi engazi, akanelisekanga yindlela yakhe yokuphila. Ephupheni kubangela ukuba unqumame akwazi ukuqala kwakhona.
Kwelinye icala, uphawu lwephupha ngengqondo "yokungena" kutoliko lwephupha lunenxalenye yesini kunye neyoyikisayo. Umntu ongena kwigumbi okanye kwigumbi elingena kwindawo yokulala engenanto kwaye ke oko kubangela uloyiko lokuqala lwamandla kunye nobundlobongela, mhlawumbi ngokwesondo. Iphupha lokubhoda liqhuba isidingo sokhuselo Imfihlo.
Uphawu lwephupha «faka» - ukutolika kokomoya
Ukungena kukuchazwa kwamaphupha kwinqanaba lokomoya njengophawu lwephupha lwe Ungenelelo ngesiqu sakho njengendawo engcwele engaphephekiyo. Ukwazi ubuqu bakho bokomoya kukhusela iphupha ekungcolisweni.